Fanarahana FTC | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ity manaraka ity dia mamaritra ny fanarahan-dalàna ataon'ny Federal Trade Commission ho an'ny tranokalan'ny My Traffic Blog.
Izahay dia manao ny ezaka rehetra amin'ny hatsaran-tarehy momba izay vokatra na serivisy ampiasainay, amporisihanay, na tsy hilazalaza izany ao amin'ny My Traffic Blog. Miezaka izahay mba hanavaka tsara ny vokatra na serivisinay manokana sy ny an'ny antoko fahatelo, hanamorana ny fangatahana, ny fanampiana ary ny fikarakaran'ny mpanjifa. Toy izany koa, tahaka ny ahazoantsika (sy orinasa hafa ara-dalàna) mahazo tombony amin'ny fivarotana ny vokatra na serivisinay manokana, dia mety hahazo tombony amin'ny fivarotana vokatra na serivisy hafa (toa ny mpivarotra antsinjarany) ao amin'ny My Traffic Blog. Ho fanampin'izany, na aiza na aiza vokatra na serivisy mety hiteraka fidiram-bola, dia manandrana manome tahirin-kevitra azo antoka sy tena izy izahay, fa kosa manasongadina ny zava-misy fa ny fiovana misy vokany dia be dia be ary tsy voafehy ka tsy misy antoka azo antoka. Tanjonay ny hanaiky ny torolàlana sy ny takian'ny Federal Trade Commission (FTC) ho tombontsoan'ny rehetra, ary ao an-tsaina izany dia omeo ireto fampahalalana manaraka ireto momba ny tamby sy ny fandavana ny vola azo sy ny vola miditra.
Mariho fa ny fifandraisana ara-materialy dia mety tsy ho fantatra amin'ny dokam-barotra na rohy mpiara-miasa. Araka izany, mba tsy hampidi-doza, tokony hieritreritra fotsiny ianao fa misy fifandraisana ara-materialy ary mety hahazo onitra isika ny vola na raha tsy izany, na inona na inona vidinao vokatr'ilay fitsidihana an'ity tranonkala ity, ary koa hoe izahay dia afaka manefa anay amin'ny alàlan'ny fikitihana ny rohy fotsiny.
Antoko iray na maromaro mifandray na mifandray amin'ny tranokalan'ny My Traffic Blog amin'ny lafiny sasany dia mety ho mpiara-miasa amin'i Amazon.com. Midika izany fa ny rohy mankany amin'ny vokatra ao amin'ny Amazon.com, ary koa ny fijerena mankany amin'ny fividianana, dia mety hiteraka komisiona azo. Averina indray, ny famoahana an'ity fifandraisana ity sy ny mety ho tambiny dia tsy azo atao amin'ny fotoana rehetra azo atao. Mba ho azo antoka dia hevero fotsiny fa misy fifandraisana materialy ary mety hahazo onitra amin'ny fotoana rehetra. Na dia tsy milaza hevitra mivaingana na tsy mitongilana aza ity dia fampandrenesana feno no miantso an'ity fampitandremana ity.
Tokony hieritreritra ianao fa mety hahazo onitra izahay amin'ny fividianana vokatra na serivisy voalaza ao amin'ity tranokala My Traffic Blog ity izay tsy noforonina, tompony, nahazo alalana, na nofehezinay ara-materialy. Hafa ny filazany azy, na dia fantatry ny ankamaroan'ny olona aza fa ny olona dia mivelona amin'ny alàlan'ny tombom-barotra sisa tavela aorian'ny fandrakofana ny vidiny mifandraika amin'ny fanomezana ny vokatra na serivisiny, farafaharatsiny raha teorika dia mety hisy olona tsy mahafantatra ny antoko fahatelo afaka "mampifandray" ny vokatra na serivisin'olon-kafa ary tambiny amin'ny mpamokatra / tompona serivisy amin'ny fanampiana azy hampiely ny teny momba ny fanoloran'izy ireo. Mampitaha azy amin'ny mpivarotra fotsiny. Mahalana izy ireo no mamokatra na inona na inona, fa aleony mampifandray ireo mpamorona vokatra sy serivisy amin'ireo mpampiasa farany.
Rehefa nilaza izany ianao dia tsy afaka miankina amin'ny olona mikarakara ny mahaliana anao fa ianao. Noho izany, tokony hanao fikarohana manokana amin'ny tolotra sy ny fotoana isan-karazany ianao, arakaraka ny ahafahanao mahazo aina, manao ny fahazotoanao manokana alohan'ny hanaovana fividianana vokatra na serivisy na tranokala My Traffic Blog na zavatra hafa. Ity misy torolàlana tsara ho tadidinao:
Voalohany, miasà foana hatrany amin'ny toerana misy ny tompona tranokala, anisan'izany ny ato amin'ny My Traffic Blog, dia hanana fifandraisana materialy amin'ilay mpanome tolotra na serivisy ary mety tambiny noho ny fividiananao izany, raha tsy hoe voalaza mazava. Ankoatry ny fividiananao dia mariho fa na ny fihetsikao aza dia mety hitera-bokatra amin'ity tranonkala ity. Ohatra, mety misy doka aseho ato amin'ity tranokala My Traffic Blog izay takianay amin'ny fampisehoana isaky ny mitsidika azy ireo ny mpitsidika tranokala iray.
Faharoa, raha manana ny fahalianana rehetra izahay amin'ny fampivoarana tsara ny fifandraisanay aminao, dia azo antoka fa maniry ny hizara ireo tolotra izay heverinay fa hahasoa anao izahay. Satria tsy izahay no mpanorina na mpiorina ny vokatra na serivisy, dia tsy hihazona ny fahalalana an'io fanolorana io avy aminao izahay. Raha afaka mahazo tombony vitsivitsy amin'izany ianao, na inona na inona fanararaotanao ny vokatra sy / na serivisinay manokana, dia tianay ianao mba hanao tsara. Noho izany, manao ezaka tsara izahay amin'ny fanolorana fanomezana ho anao irery izay ampiasainay manokana, na nanandrana tokoa, na raha tsy mino ny lazan'ny mpamatsy na ny foto-kevitra. Azonao atao ny miantehitra aminay amin'ny fanatanterahana an'io fanapahan-kevitra io mifototra amin'ny fampahalalana rehetra mifandraika sy azo ampiharina amin'ny fotoana fitakiana.
Fahatelo, na eo aza ny zava-misy fa tsy hitondra vokany raha tsy manonona vokatra na serivisy ho hitanao ho mahakivy na ambany ianao, tsy ny olona ihany no tsy mitovy, fa azo atao ihany koa ny miala sasatra amin'ny fitsarana. Noho izany, mba hitandremana bebe kokoa, na dia mino ny antony amam-pinoantsika aza ianao dia mety handroso hatrany ary tsy hadino fa mety hisy fiantraikany amin'ny farafaharatsiny amin'ny ampahany amin'ny volan'ny lisitra vokatra na serivisy isan-karazany ao amin'ny My Traffic Blog tranokala. Ankoatr'izay, ao anatin'izany fotokevitra izany, ny zava-misy dia misy fifandraisana hafa indraindray eo amin'ny antoko izay tsy vola, toy ny kapitaly manokana, ny sitra-po, na amin'ny fomba hafa, izay mety ho fanodikodinam-pahefana manjavozavo eo ambany fanapahan-kevitra hampiroborobo tolotra manokana. Noho io mety fisehosehoana io dia tokony hiverina tsotra fotsiny ianao na tsy hiantehitra amin'izay holazaintsika fotsiny, fa vao maika mamorona ny hevitrao mahaleo tena mba hilamina. Farany, tadidio fa mety hahazo vokatra na serivisy maimaimpoana koa izahay, fanomezana na koa hamerina hijery ireo kopian'ny entana.
Ny fijoroana vavolombelona momba ny vokatra na ny fahombiazan'ny fampiasana vokatra na serivisy dia omena mba handrava ny fahalalanao ny fanolorana. Na dia ezahina mafy aza ny hahazoana antoka fa marina izy ireo, izahay ao amin'ny My Traffic Blog dia tsy tompon'andraikitra amin'ny lesoka sy lesoka. Ankoatry ny lesoka ataon'olombelona, ​​ny fampahalalana sasany dia mety omen'ny antoko fahatelo, toy ny mpanjifa na mpanome vokatra / serivisy. Ny valiny tsara indrindra dia tsy mifandraika amin'ny ezaka faran'izay tsara, fifehezana, fahazotoana sns, ary amin'izany ny valiny aseho dia tsy azo heverina ho mahazatra, mahazatra, antenaina, ara-dalàna, na mifandraika amin'ny traikefan'ny mpampiasa antonony amin'ny. misy vokatra na serivisy nomena. Ny valiny miavaka dia mety asehon'ny tranonkalantsika ho fanasongadinana, saingy tompon'andraikitra amin'ny fahatakarana ianao fa ny valin'ny atypical dia mety tsy taratry ny zavatra niainanao. Ankoatra ny toetoetran'ny tsena dia miova ny vokatra sy ny serivisy rehefa mandeha ny fotoana. Ireo vokatra antitra dia mety hahavery ny fahombiazany. Ireo vokatra vaovao dia mety tsy manana firaketana azo antoka.
Raha toa ka misy vokatra na serivisy mifandraika amin'ny fidiram-bola, dia toy izany koa ny fiarovana ny fampiasana fijoroana vavolombelona. Fanampin'izany, mariho fa ny tarehimarika momba ny fidiram-bola mifandraika dia miavaka manokana amin'ny olona na orinasa namokatra ireo valiny ireo, ary tsy misy antoka azo antoka fa afaka mampiasa vokatra na serivisy mitovy amin'izany na vokatra mitovy amin'izany ianao hahazoana vokatra mitovy amin'izany. Ny valiny, na dia tena misy aza, dia mety ho vokatry ny fandefasana toe-javatra tsara maro izay mety ho sarotra ny mamerina azy, ary noho izany dia tsy maintsy mandroso amin'ny fahalalana ianao fa ny vokatrao dia mety tsy hitovy amin'izay zaraina amin'ny tranokalanay.
Fakan-kevitra momba ny matihanina
Vokatra sy serivisy maro no natao hamahana olana. Ny faritra misy olana matetika dia misy ny ara-dalàna, ara-bola ary ara-pitsaboana. Izahay dia tsy milaza akory hanoro hevitra anao momba ny olana mifandraika amin'ny lalàna, ara-bola, na ara-pahasalamana. Raha toa ka mitaky fitarihana amin'ireto kianja ireto ianao dia tokony hieritreritra ny hanome torohevitra manokana avy amin'ny mpisolovava, mpitan-kaonty, matihanina amin'ny hetra, mpanolotsaina momba ny fampiasam-bola, na mpitsabo matihanina alohan'ny handraisana andraikitra. Tsy misy na inona na inona mety hifandraisantsika ao amin'ny My Traffic Blog, amin'ny pirinty na am-pitenenana, izay natao hanomezana torohevitra toy izany, satria tsy mihambo ho matihanina amin'ireo taranja ireo izahay. Ianao dia mihevitra ny loza rehetra mety hitranga amin'ny hetsika natao, fatiantoka nitranga, fahasimbana na olana hafa nateraky ny fampiasanao ny vokatra na serivisy amin'ny fomba mifandray na voalaza ato amin'ity tranonkala ity. Raha ny marina, ny fanapahan-kevitra toy izany dia anao irery, na voafaritra miaraka amin'ny torolàlana matihanin'ny mpanolotsaina nofidinao.
Fampiasana ny vokatra sy serivisy
Ireto manaraka ireto dia zava-misy tokony hilazana anao raha mikasa ny hanararaotra ireo vokatra na serivisy ianao:
Ny vidin'ny vidin'ny vokatra sy serivisy dia miova rehefa mandeha ny fotoana. Na ny vidin-tsakafo sy ny kojakoja fototra aza dia miova, ary misy antony marobe toy ny famatsiana sy ny fangatahana, ny varotra ary ny fandrisihana ho an'ny mpanjifa hafa, sns. Ny vidiny sy ny sandany dia mety ho somary mifandraika ihany. Ny teknolojia, ny fanavaozana, ny fanatsarana ny vokatra, ny fidiran'ny tsena, ary ny anton-javatra maro hafa dia mandanja avokoa. Tsy azo atao ny mamaritra ny vidiny "marina" ho an'ny vokatra sy serivisy rehetra. Ny mpividy vonona sy ny mpivarotra vonona no mamaritra ny vidiny amin'ny fotoana rehetra. Manaiky ianao fa ny fividiananao dia maneho ny toetranao manokana amin'ny lanja amin'ny fotoana ividiananao, ary mety hiakatra na hihena ny vidiny amin'ny ho avy.
Ny vokatra iainanao dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Ny fahaiza-manao sy ny fihetsika dia lasa lavitra amin'ny fahombiazana amin'ny vokatra sy serivisy saika amin'ny sehatra rehetra, na fanatanjahan-tena na fitadiavam-bola. Ny toe-javatra, ny traikefa, ny fahaizana voajanahary, ny toetra, ny fanabeazana, ny fanoloran-tena amin'ny fotoana ary ny fikirizana dia antony vitsivitsy fotsiny. Raha jerena ny smorgasbord misy miovaova mifandraika, tsy misy fomba haminavina mialoha ny valiny manokana amin'ny fahamendrehana na ny fahamendrehana.
Vokatra sy serivisy mamokatra vola miditra
Ireo vokatra sy serivisy mpamokatra fidiram-bola dia iharan'ny fampitandremana etsy ambony ihany koa. Ho fanampin'izay, na izany aza, misy lafin-javatra fanampiny tianay horesahina ao amin'ny My Traffic Blog. Tsy toy ny levitra vokatra na fitaovana fanampiana ny tenany, ny fomba famokarana fidiram-bola dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ankapobeny amin'ny toekarena izay iasan'ny olona iray. Amin'ny fotoanan'ny fitantanan-draharaha dia mikoriana malalaka ny vola ary mora kokoa ny varotra. Amin'ny fotoan'ny tsy fahampiana, ny tahotra, ny fihemorana, ny famoizam-po, na amin'ny fomba hafa, ny varotra dia aolavina. Ny valiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahatsapana ny tsena, toy ny fampahalalam-baovao momba ny tsenambola erak'izao tontolo izao dia voadona amin'ny vaovao.
Vokatra sy serivisy mpamokatra fidiram-bola novidina dia tokony hojerena tahaka izany - fividianana. Na dia mety ho fampiasam-bola amin'ny orinasan'izy ireo aza izy ireo, dia tsy mitombina ny manantena fa mety tsy hisy ny valiny mazava momba izany fampiasam-bola izany. Matetika, ny fahombiazan'ny orinasa dia ny fampifangaroana anton-javatra maro, fomba, paikady sns. Mety ho sarotra ny mametaka fahombiazana amin'ny fomba iray na machining. Tsy voatery hanimba ny lanjan'izay vokatra na serivisy nomena azy io, satria mety hisy vokany fanampiny. Na, mety tsy misy vokany. Satria mety ho sarotra ny milaza azy, dia tokony hiasa amin'ny fiheverana ianao fa mety ho aotra ny vokanao. Izahay dia tsy manome antoka fa tsy tokony hiantehitra amin'ny zavatra zakanao very fotsiny amin'ny fividianana na amin'ny alàlan'ny My Traffic Blog.
Fandraisana sy fidiram-bola
Raha jerena ireo anton-javatra rehetra etsy ambony, miantehitra amin'ny tena toetran'ny vokatra sy serivisy mamokatra fidiram-bola, dia tsy misy fomba hiantohana ny valin'ny karazana na inona na inona. Arak'izany dia manamafy izahay fa tsy manome antoka momba ny karamanao sy ny vola miditra aminao amin'ny fotoana rehetra.
Tahaka ny ezaky ny orinasa na ny fampiasam-bola, ny fampisehoana taloha dia tsy antoka na faminavina ny ho avy. Izay fijoroana vavolombelona na fanehoana valim-pifidianana hafa dia natao ho an'ny fanoharana fotsiny, ary na dia natao aza ny ezaka rehetra mba hahazoana antoka fa marina izy ireo, dia tsy natao hampidirina na hanala baraka izay mety hitranga aminao izany. Ny torohevitra momba azy ireo dia tsy voalaza.
Tsara homarihina fa ny "karama sy fidiram-bola" dia fehezina miaraka amina fikasana manokana. Na dia mety manondro ny karama indrindra aza ny karama na tadiavina na efa mahazatra azy, ny vola azo dia azo avy amin'ny endrika tsy vola. Anisan'izany ireo endrika sasany izay tsy azo tsapain-tanana na tsy azo tsapain-tanana, ary noho izany dia tsy nivadika ho vola na karazana fifanakalozana iraisana. Noho izany, mariho fa ny karazana tambin-karama rehetra, ao anatin'izany ny vola miditra amin'ny endrika tsy fidiram-bola nefa mahasoa ihany koa, dia voarakitr'ireo fepetra ireo.
Affiliate sy antoko fahatelo hafa
Tsara ihany koa ny manamarika fa ny fanaraha-maso ihany no ananantsika ary noho izany dia tsy mandray andraikitra afa-tsy ny votoatin'ity tranokala My Traffic Blog nosoratanay ity izahay. Izay fisolo tena ataon'ny hafa dia tokony ho raisina ho prima facie tsy nahazoana alàlana. Azonao atao koa ny mamaky, maheno, na mifanerasera amin'ny fanehoan-kevitra momba ny vokatra sy serivisy na tolotra ataonay, ary tokony hieritreritra ireo fa tsy nahazo alalana ireo.
Na dia mety hipoitra aza ny fampahalalana, amin'ny endriny rehetra, amin'ny fotoana rehetra, momba ny vokatrao sy ny serivisinay, dia mety misy fotoana izay vokatry ny fifandraisana akaiky. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny mamela ny vokatra sy serivisinay hivarotra amin'ny alàlan'ny olon-kafa, orinasa, tranokala, ary raha tsy izany, toy ny mpamatsy entana sy serivisy mampiasa mpivarotra sy mpivarotra hafa hanome izay atolotray.
Tsy tokony handika ny tolotra ankolafy fahatelo ianao ho toy ny fanohanan'ny ankolafy fahatelo ny vokatra na serivisy ity. Tokony hijerena azy io ho toy ny tolotra hividianana zavatra ianao, amin'ny fomba nentim-paharazana. Toy izany koa, araka ny noresahina teo aloha, mariho fa tsy afaka mifehy tanteraka ny fomba ara-barotra rehetra ataon'ny antoko rehetra isika. Miaraka amin'ny fampiasana tranokala "fitaratra", mpiara-miasa ankolaka na tsy nahazoana alàlana, rafitra mpiara-miasa "tiered", sns., Ny fiambenana ny tranonkala manerantany amin'ny fomba feno rehetra. Izahay dia manao ezaka araka ny antonony mba hiantohana ireo mpiara-miasa aminay hanaja ny politikanay sy hisolo tena ny vokatray sy ny serivisy mifanaraka amin'ny torolalanay. Na izany aza, ao amin'ny My Traffic Blog dia tsy afaka manome toky fa hanao izany foana izy ireo. Malalaka foana ianao amin'ny tatitra momba ny ahiahy na fanararaotana amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba anay.
Farany, nefa tsy kely indrindra, mariho azafady fa ny anjara asanay amin'ny fampahalalana anao momba ny vokatra sy serivisy ankoatran'ny anay dia "matchmaker" fotsiny. Izahay dia tsy manome fanohanana na serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ireo zavatra ireo ary tokony hifandray amin'ny tompona na mpamatsy ireo vokatra na serivisy ireo foana ianao mba hahitana sy hamaly ny fanontaniana rehetra momba ny fahafaham-ponao alohan'ny fividianana.